Sochie site na WordPress chepụtara na Google Analytics
Mọnde, Febụwarị 8, 2010 Sunday, Eprel 24, 2016 Douglas Karr
M dere ederede ọzọ banyere otu esi agbaso ọtụtụ ndị edemede na WordPress na Google Analytics otu mgbe tupu, ma enwetaghị ya! Na mpụga WordPress Loop, ị nweghị ike ijide aha onye edemede ka koodu anaghị arụ ọrụ.
Ndo maka ọdịda.
Emeela m igwu ala ọzọ ma chọpụta otu esi eme ya mara ihe na profaịlụ Google Analytics. (Ezigbo obi eziokwu - nke a bụ mgbe ị bịara hụ ọkachamara n'anya nchịkọta nchịkọta dị ka Webtrends!)
Kwụpụ 1: Tinye Profaịlụ na ngalaba dị
Nzọụkwụ mbụ bụ ịgbakwunye profaịlụ ọzọ na ngalaba gị ugbu a. Nke a bụ nhọrọ nke ọtụtụ mmadụ amachaghị mana ọ na-arụ ọrụ zuru oke maka ụdị ọnọdụ a.
Nzọụkwụ 2: Tinye Ntinye na Nkọwapụta Onye Ọdee Ọhụrụ
You'll ga-achọ naanị ịlele echiche peeji nke ndị edemede dere na profaịlụ a, yabụ tinye nzacha maka subdirectory / ode akwukwo /. Otu ndetu na nke a - ekwesịrị m ịme "nke nwere" dị ka onye ọrụ. Ntuziaka Google na-akpọ maka ^ tupu folda ahụ. N’ezie, ị nweghị ike ide ^ n’ọhịa!
Nzọụkwụ 3: Tinye nzacha na-ewepu na Profaịlụ Primary gị
Gaghị achọ n’ezie ịdebe ihe ngosi peeji ndị ọzọ nke onye edemede dere na profaịlụ mbụ gị, yabụ tinye nzacha na profaịlụ mbụ gị ewepu subdirectory / site-edemede /.
Kwụpụ 4: Tinye Loop na Akwụkwọ Nsọ Akwụkwọ
N'ime usoro nyocha Google Analytics gị dị na n'okpuru akara trackPageView dị ugbu a, gbakwunye usoro ndị a na faịlụ isiokwu gị.
var authorTracker = _gat._getTracker ("UA-xxxxxxxx-x"); edemedeTracker._trackPageview ("/ site-edemede / ");
Nke a ga - ejide nsuso gị niile, site n’aka onye edemede, na profaịlụ nke abụọ maka ngalaba gị. Site na ewepu nsuso a site na profaịlụ mbụ gị, ị gaghị etinyekwu akwụkwọ nyocha ndị ọzọ na-enweghị isi. Buru n’uche na ọ bụrụ na inwere peeji nke nwere 6 posts, ị ga - agbaso nyocha peeji 6 na koodu a - otu maka ọkwa ọ bụla, onye edemede dere ya.
Nke a bụ otu Onye Nyocha akwụkwọ ga-esi lee profaịlụ ahụ kpọmkwem:
Y’oburu n’emezue nke a n’uzo di iche, a na m emeghe uzo ozo iji soro ihe omuma akwukwo! Ebe ọ bụ na ego m na-enweta na Adsense metụtara profaịlụ, enwere m ike ịhụ ndị ode akwụkwọ na -emepụta ọtụtụ mgbasa ozi :).
Tags: odeeedemede nsusoGoogle Analytics
Feb 8, 2010 na 3:16 PM
Akwa post Doug! Nhọrọ ọzọ maka nsuso Ndị edemede na ọkwa a bụ nsuso ihe omume na GA. You nwere ike ịnweta ọnụ ọgụgụ ole ugboro ole a na-elele ihe niile ederede ndị edemede gị, n'otu profaịlụ dị ka data gị oge niile, na-enweghị ịkọwapụta nyocha peeji. Ọzọkwa, ị nwere ike iji ọtụtụ akụkụ na Ihe omume Omume iji hụ ihe isi mmalite na-eme ka ndị ọbịa dịgasị iche iche (dịka onye na-adọta ọtụtụ ndị na-agụ site na Twitter), ebe ha na-abịa, wdg. M gbalịrị ịde edemede ahụ, mana m gafere oke njirimara ahụ. Nke a bụ njikọ ahụ: http://www.wheresitworking.com/2010/02/08/tracking-authors-in-wordpress-with-google-analytics-event-tracking/
Feb 10, 2010 n’elekere 8:50 nke abali
Doug, o yiri ka ị na-etinye ihe ziri ezi post n'oge kwesịrị ekwesị, m ga-emejuputa nke a na Indiana Insider blog (http://www.VisitIndiana.com/blog/) taa!
Egwu, daalụ maka ịkekọrịta Doug a! Achọpụtara m na achọrọ do_author () a ga - eji dochie_the_author () iji gbochie ịdepụta aha onye edemede na ugboro abụọ.
Ọzọkwa, olee otu azịza gị si dị ka nke Adam?
Jenụwarị 27, 2011 na 7:32 PM
Doug, Agbalịrị m imejuputa nke a, mana ọ bụ naanị nsuso nlele nke ezigbo ode akwụkwọ (author / edemede / AUTHORNAME), ọ bụghị echiche nke post ọ bụla elere anya, nkewa edemede - echiche ọ bụla?
Jenụwarị 27, 2011 na 7:42 PM
Izọ m si tinye ya n'ọrụ bụ iji akaụntụ abụọ dị iche iche n'ime Google Analytics (koodu UA dị iche). M na-akpọ otu akaụntụ “Onye edemede” na nke ọzọ m na-edebe ka saịtị ahụ dum. Nwee uche?
Jenụwarị 27, 2011 na 7:46 PM
Oh, abụọ kpamkpam iche iche UA Koodu? Naanị m melite profaịlụ ọhụrụ n'okpuru koodu UA blog. Aga m enye onye ahụ otu ihe ma gwa gị ma ọ baara m uru.
Daalụ nke ukwuu. Ana m agbalị nke a ugbu a. Otu ihe ezie, ewepụrụ m "ikwughachi" site na akaghị n'ihi na ọ dị ka ọ na-edegharị aha onye edemede. Ọmụmaatụ / site-edemede / chepụtara AhaAuthor Aha na-apụta na nkuzi mgbamejije.
onye mbipụta akwụkwọ
Ọkt 12, 2014 na 4:23 PM
Daalụ maka nkuzi ahụ. Achọrọ m iji nyochaa akwụkwọ onye ọ bụla na-ede akwụkwọ na blọọgụ akụkọ na-agbakọ iji kwụọ ụgwọ ha site na echiche.
Gụnyere homepage anaghị arụ ọrụ n'ezie.
Nwere ike iwepu koodu na homepage? Ọ bụrụ na etinyere koodu ahụ naanị na nhazi peeji naanị (nhọrọ dị na ibe weebụ), nke ahụ ọ ga-arụ ọrụ? ewepu echiche elere na ọnụ ọgụgụ?
Ọkt 12, 2014 na 4:49 PM
Anyị na-eji ya eme ihe Akuko.ly maka nke ahụ ma ọ na-arụ ọrụ nke ọma.
Mee 16, 2015 na 8: 54 PM
Kedu ka ị si eme nzọụkwụ 1 biko: “tinye profaịlụ ọzọ na ngalaba gị ugbu a”
Show na-egosi otu esi mezue nzọụkwụ ahụ, mana ọ bụghị otu esi aga ebe ahụ na mbu.
Mee 17, 2015 na 9: 28 PM
Ha ji n'aka na ọ naghị eme ka ọ dị mfe, ka ha Justin? Nke a bụ nnyocha na Google Analytics page.